Axe sombin-javatra telo tsindrona Machine - Bobo Machine Co., Ltd.
Pu sombin-javatra Machine
Wire & Strip fiforonana Machine
Miolakolaka Sodina Machine
Wire tady Machine
CBD, Nantong , Jiangsu, Shina
Miolakolaka Duct Machine
Malefaka Duct Machine
Mahitsizoro Duct Machine
Wire amin'ny Condenser Tube Machine
Tube Ny fiforonana Machine
Polyurethane tenan'ny sombin-javatra Machine
Polyurea fanafody Machine
Pu tsindrona sombin-javatra Machine
Polyurethane Pourig sombin-javatra Machine
fibre- Resin tenan'ny Machine
Wire & Strip fiforonana Mac
Wire hiondrika Machine
Spring fiforonana Machine
Izaho Jehovah no manao barika Lock Ring Machine
Steel Coil Edge Fiarovana Corner Machine
Mitafo fanitso Post-olana Sodina Machine
Miolakolaka Corruagted Culvert Sodina Machine
Metal malefaka Hose Machine
Casing ivelany Conduit Machine
Hanivana Core Tube Machine
Wire tady Cutting Machine
Tady Press Wire Machine
Tubeless Wheel Rim Production-dalana,
Kodia Side Production Disc-dalana,
Wheel Ary Rim Machine
Add :CBD, Nantong , Jiangsu, Shina
Axe sombin-javatra telo tsindrona Machine
Delivery iombonana: EXW,FCA,Fas,FOB,CFR,CIF,CPT,CIP,dat,DAP,DDP
Payment: 30% nidina fandoavam-bola amin'ny alalan'ny T / T,ny fifandanjana eo anoloan'ny fandefasana.
Fe-potoana: witin 10-35 andro taorian'ny fandraisana an fandoavam-bola.
Guarantee: ao anatin'ny herintaona hatramin'ny daty B / L.
1. Ny tena fanatanterahana ny milina io dia nahatratra ny fari-mandroso hiray fitaovana nafarana, sy ny endri-javatra toy ny feno automatique, azo antoka fampisehoana, mety asa sy ny fikojakojana.
2. Io milina famehezana dia afaka handatsaka esory amin'ny endrika samy hafa an-dovia na Groove hitsena ny fepetra takiana, ny tena hoditra manify ID ambonin'ny malefaka sy lasitike, ny Shaw hamafin'ny ID A10 ~ 20. Mba handatsaka famehezana esory reliably, ny milina efa fitaovana tamin'ny Mini mazava tsara sady nasiany rafitra amin'ny lafiny tsara sy azo antoka sady nasiany fanitsiana.
3. Ny fiara manompo maotera fiara LCD rafitra fitaovana amin'ny solosaina avy hatrany ny fanaraha-maso ny dingana sady nasiany hitsena ny endriky takian'ny mpanjifa.
1. Ny ara-nofo tanky fitehirizana na ny fanaka telo sosona Stainless vy amin'ny Mixer sy ny fiara foana ny mari-pana rafitra. Koa fitaovana amin'ny fiara sy ny sakafo ara-nofo anivon'ny rafitra famantarana.
2. Ny ara-nofo dia ny iva paompy-hafainganam-pandeha avo famarana marina tsara paompy amin'ny mazava noroahina sy numberical miseho fitaovana. Koa fitaovana amin'ny materail hihena sy ny fanaraha-maso ny mari-pana fiara rafitra.
3. Hanova ny fampidirana ny asa loha toerana (sady nasiany, back-tsingerin'ny, fanadiovana) ho azy, ary ny fampidirana lohany dia hifindra pneumatically rehefa avy sady nasiany, ary manadio ny lohany amin'ny alalan'ny programa fanaraha-maso. Koa fitaovana amin'ny fiara nijanona sakafo fitaovana.
4. Haingam-pandeha hetsika ny lohany amin'ny alalan'ny tsindrona mandeha ho azy 3 mpiray manipulator, sady nasiany tombo-kase dia afaka ny amin'ny kianjan'i, mahitsi-, ect endrika manokana.
5. The hydraulic gazety, hafanana, ary nandraraka fahaiza-dia fehezin'ny ordinatera.
GZ20F-I (fisaka karazana)
GZ20F-II (Groove karazana)
Fivoahana fahafahana (h / s)
Mandaitra Miasa Size X / Y (MG)
mifindra Speed (m / min)
Viscidity Of mifangaro Material (CPS)
Miolakolaka Filter Core Making Machine
Portable Seam fisoloana akanjo
Fizarana Angle Steel Manao Machine JY-50
Copper / Aluminum / Bundy Tube nanitsy & Chipless Cutting Machine
Isika dia mpanamboatra ny vy amin'ny fikarakarana milina ampy fitaovana tsara fitaovana fitiliana sy ny hery ara-teknika matanjaka.